Isikrini seGoogle Pixel 3 senziwe yi-LG | I-Androidsis
Isikrini seGoogle Pixel 3 senziwe ngeLG
Kutyhilwe kutshanje ukuba Iphaneli kaGoogle yePixel 3 XL yenziwa yiSamsung. Ewe, njengenye into entsha, kufunyenwe ukuba ifayile ye- Pixel 3, umninawa omncinci wokuqala okhankanyiweyo ongenayo Inotshi Kuyilo lwayo, inescreen esenziwe yenye inkampani yaseMzantsi Korea, kwaye ayisiyiyo enye ngaphandle kwe-LG.
Oku kubonisa ukuba iiphaneli ezinala duo zikumgangatho ophezulu, Njengokuba zombini iimveliso zabanikezeli ziqinisekisa inqanaba eliphezulu lomgangatho kuwo onke amacandelo, ke siyazi ukuba ezi zixhobo zenziwe ngamacandelo afanelekileyo, ngaphandle kokuba enye yazo, IPixel 3 XL, ineengxaki.
Olu lwazi lukhutshwe ngu iFixit, eyayiphethe ukuqaqa, iziqwenga ngePixel 3 ukujonga indlela le terminal entsha eyakhiwe ngayo ngamandla amangalisayo kwicandelo lokufota.
Ezi ndaba zinokungothusi kakhulu, kwaye ngakumbi nangakumbi ukuba sithathela ingqalelo loo nto I-LG inikezela iinkampani ezininzi kunye nabavelisi ngeepaneli kunye nezinye izinto eziphambili, njengoko kwenza iSamsung. Ngokufanayo, kuba I-Pixel 3 XL Iphethe iscreen seSamsung, amarhe amaninzi athi oku kwahluka kuya kuxhobisa olunye uphawu, into engakhange yenzeke kanjalo, kunjalo.
Fumanisa: I-Google Pixel 3 kunye nePixel 3 XL, nantsi indlela ethelekiswa ngayo nokhuphiswano
Ngakolunye uhlangothi, I-iFixit ikalwe ixabiso lokulungiswa kwePixel 3, enye into ahlala ezinikezela kuye. Ukulinganiswa kwe-4 kwe-10 yinto oyifumeneyo, efanayo naleyo iphunyezwe yiPixel 3 XL kwaye eya kuvela iphantsi kakhulu kwaye ayonwabisi, iyinyani. Kodwa oku kuhlala kunjalo. Ngamanye amagama, uninzi lweefowuni zeflegi ezihlala zifika kwintengiso zinenqanaba eliphantsi kweli candelo, elishwankathelwe kwinto engeloncedo kwabanye abathengi kunye nesizathu sokungayithengi. Ndiyathemba ukuba oku kuyakutshintsha kwikamva elingekude kakhulu kwaye iinkampani azizuku "khusela" iifowuni zazo ezibiza kakhulu; ubuncinci abonelanga ukuze kungabi yingxaki ukuzilungisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Isikrini seGoogle Pixel 3 senziwe ngeLG
I-OnePlus iguqula umhla wokubonisa we-OnePlus 6T
UPiffle kunye neekati zakhe zilapha zivela kubadali beCrossy Road